Loza inona ity lazainy? | mandimby maharo
Loza inona ity lazainy?
Posted on 13 February 2013 by Mandimby Maharo
Mafanafana ny toedraharaha eo anivon’ny tontolon’ny fanaovan-gazety malagasy. Na dia atao hoe fomban-javatra efa fahita hatrizay aza io dia toa mampanahy be ihany ny zava-mitranga ankehitriny. Niarahana naheno sy nahita ohatra tamin’ireny hetsika fanonganam-panjakana ny taona 2009 ireny ny fanenjehana ireo mpanao gazety tsy mpomba ny Tgv. Voatonontonona anarana ry Ruffin Rakotomaharo, filohan’ny olafitra tamin’izany. Teo koa ireo mpiasa tamin’ireny haino amanjery sy gazety fananan’ny filoha teo aloha, sy izay mpiara-dia aminy. Maro tamin’izy ireny no voatery niafina sy niala tamin’ny asany. Ny toeram-piasany efa may rahateo.
Niarahana nanaraka koa ireny fifamalina amin’ny radio nataon’ireo avy ao amin’ny Free FM sy ny Viva Radio ary ny Antsiva ireny. Toy ireny tantara mitohy fanaraka isan-andro ireny no niafarany. Sady natao fakana vaovao no nialana voly koa matetika. Nalaza tampoka ny fomba fiteny hoe “De gaga elah…”, sy ny “tsy diso tamin’ny famakafakana…” fampiasa tao amin’izany tantara an-tsehatra izany. Rehefa tena nahamay moa ny rà dia niafara tamin’ny fanaovana antsojay sy fanidina ilay onjapeo.Na dia voalaza fa tsy ny onja-peo no manana olana fa ireo tompony no voarohirohy amin’ny raharahm-pitsarana dia tsy namaha ny olana izany fa mbola mangina hatreto ny Free FM na dia niezaka ny hiarina ihany aza.
Tantara hain’ny rehetra koa ny fifamalina an-tsoratra eo amin’ny Madagate sy ny Midi Madagasikara syny Tananews sy ny tribune.com sy ny TopMada (izay nofoanana mihintsy moa no niafarany), sy izay rehetra tsy ho voatanisa eto. Mankaleo, mahasosotra saingy mahafinaritra koa indraindray ny maheno ireo teny mafy sy miavaka hain’ireo mpanoratra ireo. Na dia tsy mitondra vaovao firy, amin’ny maha fampahalalam-baovao azy izy ireny dia tsidihina ihany mba atao fanalan’andro.
Fa ilay zava-nitranga tato anatin’ny herinandro vitsivitsy izay no tiana hisarihana ny saitsika. Ny minisitry ny serasera, mpitondratenin’ny governemanta sy mpampita ny vaovao avy ao amin’ny fiadidina ny Fat, mpanao gazety matihanina mitondra ny anarana Rolly Mercia, dia andriamatoa Harry Laurent Rahajason no mifamaly amin’ny mpanao gazety, tonian-dahatsoratra sy lehiben’ny famokarana ao amin’ny fahitalavitra TvPlus, Onitiana Realy.
Ity farany, amin’ny maha mpanao gazety azy, sy amin’ny maha haino aman-jery tsy miankina ny orinasa entiny dia mitady izay fomba rehetra hisarihana mpihaino sy mpijery. Mahasahisahy sy manana finiavana manokana izy noho ireo antony ireo.Maka ny toeran’ny mpihaino azy izy noho izany ka mahavita mametraka ireo fanontanina izay any an-tsain’ny rehetra any. Mihoatra ny tokony ho izy koa nefa indraindray ka lasa manao resaka manokana. Tsy tantin’iroa voalohany izany ka mampiakatra ny hafanana eo amin’ny fifandraisan’ny roa tonta. Nanomboka tany amin’ny famakafakana nataon’ny Onitiana ny fanambarana nataon’ny minisitra tao amin’ny Televisiona malagasy. Niampy indray izany taorian’ny nanasan’ity mpanao gazety ity ny Fat ny zoma 8 febroary 2013 teo.
Samy henjam-piteny na ny andaniny, na ny ankilany. Ho an’ny mpijery dia maro ireo hoatohina, misy koa ireo mankasitraka ny fasahina milaza ny ao am-tsaina ataon’ireto mpanao gazety roa ireto. Saingy miara manaiky ny rehetra fa tsy dia mendrika ho aseho vahoaka loatra ireny fifandonana ireny. Manan-kasina loatra ho an’ny mpanara-baovao manko izany asa fanaovan-gazety izany. Olona tsongoin’olom-bolo ny mpanao gazety eo amin’ny fiarahamonina. Ka raha sanatria ka izy ireo indray no hiteraka olana eo amin’ny mpiara belona dia ho lo tanteraka io fiarahana monina io.
Tantara efa nisy teto izany, tamin’ny taona 2009. Olana teo amin’ny fanampenam-bava mpanao gazety no singa nameno ny vera ka nandravana fanjakana. Lahatsoratra an-gazety sy haino aman-jery no namoizana fanavakavakana sy fifandrafesana. Mpanao gazety no nanentana ny olona hamimba ny fiarahamonina. Koa sanatria tsy ho ny asa fanaovan-gazety na ireo olona miasa ao indray anie no andrava hefa eto. Mila filaminana ny firenena, hoy ny voalaza embieny ombieny. Sao dia tokony ho izany no anjara biriky azon’ny mpanao gazety entina amin’izao famahana olana sy firosona ho any amin’ny fifidianana izao?
Teny atsipy any am-pon’ny mahalala izany. Tsy aritra ka na dia tsy hisy hisaina ary satria “gazety fialam-boly” ihany ity anoratako azy ity dia anjaran’ny tsirairay ny mahatsapa izay tokony ho tandrify azy.
Tags: GAzety, Madagasikara, Onitiana, Rolly, TvPlusCategories: Média